Fomba 6 hiaraha-miasa amin'ireo influencer tsy misy sponsorship | Martech Zone
Raha maro ny olona no mino fa ny marketing influencer dia natokana ho an'ny orinasa lehibe manana loharanon-karena be dia be, dia mety hahagaga ny mahafantatra fa matetika dia tsy mitaky tetibola izany. Marika maro no nisava lalana tamin'ny marketing influencer ho antony lehibe mahatonga ny fahombiazan'ny e-varotra, ary ny sasany dia nanao izany tamin'ny vidiny aotra. Ny influencers dia manana fahaiza-manao lehibe amin'ny fanatsarana ny marika, ny fahatokisana, ny fandrakofam-baovao amin'ny haino aman-jery, ny fanarahana ny media sosialy, ny fitsidihana tranokala ary ny varotra. Ny sasany amin'izy ireo izao dia ahitana kaonty lehibe indrindra ao amin'ny Youtube (eritrereto mpilalao Youtube malaza toa an'i PewDiePie izay manana mpanjifa mahazendana 111M) na kaonty niche isan-karazany amin'ny indostria manokana (ohatra amin'izany ny mpitsabo marary sy mpitsabo miasa).
Miaraka amin'ny marketing influencer vinavinaina hitombo hatrany amin'ny 12.2% hatramin'ny 4.15 miliara dolara tamin'ny 2022, ireo marika kely dia afaka miara-miasa amin'ny influencers mba hanampy amin'ny fivarotana ny vokatra sy ny serivisiny, ary afaka manao izany amin'ny vidiny kely izy ireo. Ireto misy fomba 6 ahafahan'ny marika miasa miaraka amin'ny influencers tsy misy fanohanana:
1. Fanomezana vokatra na serivisy influencer
Ny iray amin'ireo fomba mora indrindra ahafahan'ny marika miara-miasa amin'ny influencers tsy mandoa ny lahatsorany dia amin'ny alàlan'ny fanomezana vokatra na serivisy. Azon'izy ireo atao ny mampiasa ny fitaovany ary manolotra fifanakalozam-barotra izay ahafahan'ny influencer manome fandrakofana media sosialy sasany. Ny toro-hevitra pro dia ny manatona foana ny influencers amin'ny fanolorana hevitra fa te hanolotra fanomezana ianao nefa tsy manasongadina ny mari-pamantarana marina amin'ny fifanakalozana. Amin'izany fomba izany, maro amin'ireo mpanentana ambony no mety hamaly ny fangatahanao satria tsy mahatsiaro ho "voatosika" hamaly tsy misy uneven varotra. Varotra tsy mitovy mitranga rehefa lafo kokoa noho ny vokatra na serivisy iray ny lahatsoratra feed Instagram an'ny Influencer.
Tokony ho fantatry ny marika foana fa ny influencers dia mahazo marika am-polony ary indraindray aza an-jatony isan'andro, toy ny tranga amin'ny influencers ambony. Noho izany antony izany, ny maha sariaka sy miala sasatra amin'ny fepetran'ny fiaraha-miasa dia ahafahan'ny marika hanambara ny influencer fa liana amin'ny "kiakiaka" haingana izy ireo fa kosa mitady fiaraha-miasa maharitra.
Berina Karic, manam-pahaizana momba ny marketing influencer ao amin'ny Masoivoho momba ny marketing influencer ambony, dia manoro hevitra ihany koa ny hanara-maso amim-panajana rehefa voaray ireo entana. Ny toroheviny dia ny hifandray amin'ny influencer mba hanontany azy ireo raha nahazo sy nankafiziny ny fanomezany, ary raha te hanakalo zavatra izy ireo. Ity karazana fifaneraserana am-pirahalahiana ity dia azo inoana fa hahazo isa lehibe ary hampisongadina ny marika.
2. Fitsidihana influencer
Ny marika iray dia afaka mandamina fitsangatsanganana ary mampiantrano mpikatroka marobe ary mahazo fandrakofana avo folo heny noho ny saran'ny fitaterana, sakafo ary trano. Ohatra, ny marika iray dia afaka mampiantrano mpanentana dimy hivezivezy any amin'ny toerana iray manokana ary hampiasa io fotoana io ho fotoana iray hamoronana votoaty ho an'ny vokatra ary koa hamoahana lahatsoratra marobe mandinika ireo entana na serivisy. Ity paikadin'ny PR ity dia ampiasain'ny marika lafo vidy maro izay ananany mpikatroka ambony dia mamorona lahatsoratra maro mampiroborobo ny marika mba hivezivezena sy hiarahana amin'ireo mpamorona influencer hafa. Ny fitsangatsanganana influencer ihany koa dia manome fahafahana ho an'ny marika iray hamolavola fifamatorana akaiky amin'ireo influencers izay manome fahafahana ho an'ny marika hamadika ny sasany amin'ireo mpanentana tsara indrindra ho lasa ambasadaoron'ny marika amin'ny famoahana ny media sosialy bebe kokoa.
Ity paikady ity dia notarihan'ny marika voalohany ara-tsosialy toa ny Revolve, izay hampiantranoin'izy ireo mpikatroka ambony maro any amin'ny toerana hafahafa ho takalon'ny 10-15 amin'ny lahatsoratra famahanana sy horonan-tsarimihetsika am-polony isan'andro mandritra ny fametahana ny marika.
3. Hetsika influencer
Ho an'ireo marika tsy afaka mandamina fitsangatsanganana, ny hetsika influencer dia mety hanolotra karazana fiaraha-miasa mora kokoa izay ahafahan'ny influencers mandefa votoaty marobe ho takalon'ny fanatrehana ny hetsika. Ny marika iray dia afaka mikarakara hetsika ao amin'ny biraony, trano fisakafoanana, na toerana mahafinaritra hafa ary manome harona fanomezana ho an'ny mpitaona mba hiaina mivantana ny vokatra na serivisy. Ny ekipa anatiny dia afaka mihaona mivantana amin'ny influencers ary manazava mivantana ny tombontsoa azo avy amin'ny vokatra ary mamela ny influencers haka sary na haka sary ny fampisehoana ny marika. Ny pro-tip dia ny manolotra a miavaka ary Instagrammable toerana izay ahafahan'ny influencers maka sary eo ambanin'ny marika famantarana haingon-trano na mizara ny firafitry ny latabatra voaravaka tsara amin'ny servieta manokana na marika famandrihana azy manokana.
4. Fiaraha-miasa amin'ny marika mpiara-miasa
Ny marika dia afaka mizara ny vidin'ny fampiantranoana hetsika na fitsangatsanganana influencer amin'ny alàlan'ny fanatonana ireo marika hafa ary mizara ny fahafahan'izy ireo fampielezan-kevitra. Maro ireo marika tsy mpifaninana no misokatra manokana amin'ity karazana fiaraha-miasa ity satria izy ireo dia mahazo tombony feno amin'ny fiaraha-miasa amin'ny ampahany kely amin'ny vidiny nefa tsy mila miaritra ny ezaka feno amin'ny fitantanana fampielezan-kevitra lehibe. Afaka mandray anjara amin'ny fampidirana ny vokatra ao anaty harona fanomezana izy ireo na amin'ny fanolorana toerana, trano fandraisam-bahiny, fitsangatsanganana, na karazana tolotra hafa miankina amin'ny indostrian'izy ireo manokana. izay manome fandrakofana be dia be ho an'ny antoko rehetra voakasik'izany.
5. Findrana vokatra influencer
Ho an'ireo marika izay tsy afaka manome zavatra, indrindra rehefa lafo ny entana iray na iray amin'ireo karazana, dia afaka manolotra karazana fiaraha-miasa izy ireo. Ity karazana fiaraha-miasa ity dia ahitana mpanentana mamorona votoaty amin'ny fampiasana singa iray, mamerina izany rehefa vita ny tifitra, ary avy eo mizara ilay entana amin'ny fantsona sosialy. Orinasa PR sangany maro no mampiasa ity paikady ity amin'ny fakana sary izay mampindrana ampahany amin'ny ekipa mpamoaka lahatsoratra amin'ny haino aman-jery ambony mba hangataka ireo entana ireo haverina rehefa vita ny tifitra. Mandeha tsara izany rehefa mitady fitaovana na singa miavaka ny influencer mba hampidirina ao anatin'ny atiny vaovao.
6. Fiaraha-miasa amin'ny media influencer
Raha tsy afaka manome fanomezana na mindrana entana ny marika iray dia afaka miara-miasa amin'ny influencer amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'ny haino aman-jery. Tafiditra ao anatin'izany ny marika miaro ny fampahalalam-baovao amin'ny alàlan'ny famoahana an-gazety, dinidinika, na karazana fitenenana hafa, ary avy eo mampiditra mpikatroka ao amin'ny tantarany ho ampahany amin'ny cross promotion ezaka. Ireo marika dia afaka mifampiraharaha ny fepetran'ny fiaraha-miasa mialoha, ary avy eo dia asaivo mizara ny lahatsoratra amin'ny haino aman-jery amin'ny tambajotra sosialy ny influencer rehefa manisy marika ny marika.
Na inona na inona haben'ny marika, ny fiaraha-miasa amin'ny influencers dia mety ho fomba mahomby amin'ny fanaovana dokambarotra orinasa iray ary manatsara ny marika, ny varotra, ny fandrakofana media ary ny mpanaraka ny media sosialy. Ny marika dia afaka mampiasa paikady famoronana mba hiantohana ny fiaraha-miasa amin'ny fandresena nefa tsy manimba ny banky. Amin'ny alàlan'ny fikarohana karazana fifanakalozana influencer, ny orinasa iray dia afaka mamaritra hoe inona ny paikady mahomby indrindra ary avy eo manohy manangana ny ezaka ara-barotra manodidina ny fiaraha-miasa mandresy.
Tags: berina karicfiaraha-miasa influencerhetsika influencermarketing marketingmasoivoho marketing influencerfiaraha-miasa amin'ny media influencerfampindrana vokatra influencerfanomezana vokatra influencerfanomezana serivisy influencerfitsangatsanganana influencerfiaraha-miasa marika mpiara-miasafanomezana serivisyvarotra tsy mitovy
Ramatoa Beganovich no CEO sy mpanorina ny Amra & Elma's. Izy dia mpikatroka ambony manana mpanaraka mihoatra ny 1 tapitrisa manerana ny fantsonany. Izy dia voatonona ho manam-pahaizana momba ny varotra nomerika ambony nataon'i Forbes, Business Insider, Financial Times, Entrepreneur, Bloomberg, WSJ, ELLE Magazine, Marie Claire, Cosmopolitan, ary maro hafa. Mamorona sy mitantana fanentanana dokam-barotra ho an'ny orinasa Fortune 500 izy, anisan'izany i Johnson & Johnson, LVMH, Procter & Gamble, Uber, Nestle, HTC, ary Huawei.